Nanaiky ho FIFANDRAISANA ANDRIAMANITRA !!! - Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Home »Nanaiky ho FIFANDRAISANA ANDRIAMANITRA !!!
Nanaiky ho FIFANDRAISANA ANDRIAMANITRA !!!
Isan-taona isika dia mankalaza ny fahaterahan’i Jesoa Kristy izay tonga olombelona. Ny zava-dehibe amin’izany misterin’ny fahatongavana ho nofo izany dia voalaza ao amin’i Joany 1, 14 « Ary ny Teny dia Tonga Nofo ». Tonga nofo Andriamanitra mba hanakaiky bebe kokoa antsika, mba hifaneraserantsika, mba ho azontsika… Andriamanitra eo amintsika. Izany maha akaiky antsika an’Andriamanitra izany dia azontsika lazaina hoe : « Nanaiky ho FIFANDRAISANA Andriamanitra. »
Izao androntsika izao dia antsoina hoe « andron’ny serasera, fifandraisana », hitantsika amin’izao hoe izao tontolo izao dia mampiasa fitaovana maro :
Mba hampifandray antsika samy isika ;
Mba hamoronana fifandraisana ;
Mba hampitana mzava tsara ny hafatra ;
Noho ireo fitaovam-pifandraisana ireo dia tonga toy ny tanana iray lehibe izao tontolo izao. Izao tontolo iainantsika izao dia mampihetsika antsika amin’ny alalan’ireo fitaovam-pifandraisana ireo : finday, aterineto, facebook, fahita lavitra, radio… tsy vitan’izany ihany, fa mihamivoatra ireo fitaovam-pifandraisana ireo mba hampitana ny hafatra tiana hovoizina. Ny mampalaelo anefa dia ny zavatra ratsy sy ara-nofo no tena mahazo laka. Hafatra izay mifanohitra amin’izay kendren’Andriamanitra amin’ny maha-zanak’Andriamanitra antsika. Azo lazaina fa fetsy kokoa ny zanak’izao tontolo izao amin’ny fampitana ny hafany noho ny zanaky ny mazava.
Inona ary izany no tokony hataontsika zanak’Andriamanitra, zanaky ny Fahazavana ? Hoy i Jesoa hoe : « Mandehana, mitoria ny Vaovao Mahafaly amin’ny voahary rehetra. » Mk 16, 15. Ahoana no tokony ahazoantsika io teny io amin’izao andron’ny fifandraisana sy serasera izao ? Inona no tokony sy tsy maintsy ataon’ny Fiangonana fanamby amin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly ? Inona no tokony hataontsika mba hahomby amin’ny fitoriana ny famonjena an’izao tontolo izao sy ho fanohizana ny asan’i Jesoa Kristy ?
Raha mandinika an’i Jesoa nitory ny Fanjakan’Andriamanitra isika dia mahita sy mahatsapa fa tena namorona zavatra maromaro Izy mba hampitana izany hafatra izany. Nampiasa fanoharana, tantara, fihetsika ary nisafidy toerana tsara mba hampitany ny hafatra. Amin’ny fahaizany mampita hafatra sy amin’ny maha Zanak’Andriamanitra Azy ary noho ny herin’ny Fanahy Masina, dia azontsika lazaina hoe : « JESOA NO MPISERASERA LAVORARY. »
Mba hampitantsika ny famonjena manerana izao tontolo izao, dia tsy maintsy ampiasaintsika ny fitaovan-tserasera rehetra misy amin’izao androntsika izao. Raha mijery ny fahitalavitra isika dia tsara be ny haingo, ny fitafy ary manintona ny fiteny sy ny fihetsika. Tsy tongatonga ho azy ireny fa nisy famerenana be dia be, misy ny vola lany. Atao inona izany rehetra izany ? Mba hampitana ny hafatr’izao tontolo izao. Ary isika ? Mbola mianona amin’ny fomba tsotra sy nahazatra. Tsia, mila mivoatra sy manaraka ny toetr’andro isika.
Ny Evanjely dia mendrika ny ho toriana amin’ny fomba rehetra. Andriamanitra sy ny asany dia mendrika ho toriana sy hijoroana vavolombelona amin’ny herintsika rehetra, amin’ny saintsika sy izay mety ho tratry ny fahefantsika. Satria nahoana ? Ny FAMONJENA ny olombelona no zava-kinendrintsika fa tsy izao tontolo mandalo izao. Noho ny fanilovan’ny Fanahy Masina dia te hanome voninahitra an’Andrimanitra isika amin’ny alalan’ny fomba fitoriana iray dia ny Tambazotran-tserasera momba ny fitoriana sy ny fiainan’ny karismatika Katolika FIOMBONANA eto Madagasikara.
Efa taona maro izay no te hiditra amin’izao fomba vaovao izao isika nefa tsy tanteraka izany raha tsy ankehitriny. Faly aho, fa amin’izao famaranana ny taon-jobily volamenan’ny karismatika izao isika eto Madagasikara no afaka manolotra ho an’ny Fiangonana sy ny Fanahy Masina izany fomba fitoriana vaovao izany. Izany rehetra izany dia ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
Mirary soa ho antsika rehetra ao amin’ny fitiavan’i Kristy Tenin’Andriamanitra.